April 2020 – " कञ्चनजंगा News "
लकडाउनको बेला आज इलाममा घटेको अति दु:खद घटना, हेर्दा हेर्दै चितामा जलिरहेको शव बाढीले बगायो, मलामीको भागाभाग (भिडियो सहित)
No Comments on लकडाउनको बेला आज इलाममा घटेको अति दु:खद घटना, हेर्दा हेर्दै चितामा जलिरहेको शव बाढीले बगायो, मलामीको भागाभाग (भिडियो सहित)
काठमाडौं– इलामको फाकफोक खोलामा आएकोको बाढीले चितामाथि जलिरहेको शव बगाएको छ । खोलामा एक्कासी बाढी आएपछि मलामी गएकाहरुको भागदौड मच्चिएको थियो । खोला किनारामा जलाइएको शव खोलमा आएको भीषण बाढीले बगाएको हो ।
शव पुरै नजलिसकेकै अवस्थामा खोलामा बाढी आएछि चितासँगै शवलाई बगाएको भिडियोमा देखिएको छ । केही दिन यता अविरल वर्षा भइरहेका कारण खोला किनारामा पानीको सतह बढेपनि आज इलामको पहाडी क्षेत्रमा परेको भीषण वर्षाका कारण खोलामा बाढी आएको स्थानीयले बताएका छन् ।
बाढीले शव बगाए पनि मलामी गएकाहरु भने सुरक्षित रहेको जनाइएको छ । जल्दै गरेको शव बाढीले यसरी बगायो हेर्नुस् भिडियोमा
भरतपुर कोरोना अस्पतालका कर्मचारीले रातमा सामान चोरेको भिडियाे फुटेज सार्वजनिक, देशलाई दुखेको बेला कर्मचारीले लुटेर समान लगे (भिडियोसहित)
No Comments on भरतपुर कोरोना अस्पतालका कर्मचारीले रातमा सामान चोरेको भिडियाे फुटेज सार्वजनिक, देशलाई दुखेको बेला कर्मचारीले लुटेर समान लगे (भिडियोसहित)
No Comments on अमेरिका, नर्वे, जापान, इङ्गल्याण्ड र पोल्याण्डमा रहेका अनुभवी डाक्टरले नेपाल सरकारलाइ भने, ‘तत्काल लकडाउन, अन्तर्राष्ट्रिय उडान र सिमाना नखोल्नु होला नत्र इटाली, स्पेन र अमेरिका जस्तै हुन् सक्छ !’
क्वारेन्टाईनबाटै २२ वर्षिया महिला परपुरुषसँग पाेईला भागिन् ! ३ दिनसम्म हिंडेर आउँदा बाटाेमै परेको थियो लभ, रुँदै बताईन् दिदीले, हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
No Comments on क्वारेन्टाईनबाटै २२ वर्षिया महिला परपुरुषसँग पाेईला भागिन् ! ३ दिनसम्म हिंडेर आउँदा बाटाेमै परेको थियो लभ, रुँदै बताईन् दिदीले, हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
काठमाडौं । लामो समय देखिको लकडाउनका कारण विश्वभरमा मात्र होइन नेपालमा पनि रोचक खबर बाहिर आउन थालेका छन् । वारा जिल्लाको निजगढ नगरपालिकामा एक २२ वर्षीया महिला क्वारेन्टाइनवाट भागेर एक पुरुषसंग विवाह गरेर गएकी छन् । उनको नाम गंगा गुरुङ भएको बताइएको छ । कोरोनाको जोखिम रहेर क्वारेन्टाइनमा राखेको अवस्थामा भागेका कारण उनलाई प्रहरीले केही घण्टा नबित्दै पक्राउ गरेको छ । उनले आफ्नो वैवाहिक जिवन रमाइलोसंग विताउन नपाउँदै प्रहरीको फन्दामा परेकी छन् ।
उनी १८ गते काठमाडौवाट हिडेर वारा पुगेकी थिइन् । पैदल हिडेर उनी ३ दिन हिडेर वारा पुगेको हो । उनीसंगै रहेकी दिदीले यो कुरा खुलाएकी छन् । काठमाडौंवाट पैदल हिडेर पुगेका कारण उनीहरुलाई ज्वरो आएको थियो, खुट्टा पनि सुन्नीएको थियो त्यसैले उनीहरुलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको थियो ।
क्वारेन्टाइनमा हुँदा बहिनी फोनमा कुरा गरिरहन्थिन् तर दिदीले वास्ता गरिनन् । उनको वहिनी पनि विवाहित भएको र आफ्ना श्रीमानसंग भने केही समय यता राम्रो स’म्बन्ध नभएको दिदीले बताएकी छन् । बहिनीको २ बच्चा पनि छन् । जेठो सन्तान ६ वर्षको रहेको दिदीले बताइन् ।
बहिनी जो संग भा’गिन् त्यो पुरुष पनि एउटै गाउँको भएकाले काठमाडौंवाट पनि संगै गएका थिए । काठमाडौंमा भेटिएपछि हामी एउटै गाउँमा जाने मान्छे संगै जाउँ भनेपछि संगै गएको बताइन् । बहिनी त्यसरी हिडेपछि २ छोराछोरीलाई बहिनीको पहिलाको श्रीमानको परिवारले नै लिएर गएको बताइन् ।
‘अ’पहरण’ मुद्दा दर्ता गर्न बाबुरामसहितका नेता पुगे प्रहरी परिसर टेकु, तर जाहेरी लिन नमानेपछि प्रहरी र भट्टराईलगायत नेताहरुबीच चर्काचर्की
No Comments on ‘अ’पहरण’ मुद्दा दर्ता गर्न बाबुरामसहितका नेता पुगे प्रहरी परिसर टेकु, तर जाहेरी लिन नमानेपछि प्रहरी र भट्टराईलगायत नेताहरुबीच चर्काचर्की
काठमाडौँ । आफ्ना सांसदको अ’पहरण गरिएको भन्दै मुद्दा दर्ता गर्न जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरु प्रहरी कार्यालयमा पुगेका छन् । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसदद्वय महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठ तथा पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक सवेन्द्र खनालविरुद्ध अ’पहरण तथा शरीर बन्धकको मुद्दा दर्ता गर्न जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरु महानगरीय प्रहरी परिसर, काठमाडौं पुगेका हुन् ।
उक्त पार्टीका सांसद एवं पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री सुरेन्द्र यादवसँगै जसपाका शीर्ष नेताहरु पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतोलगायत टेकु पुगेका हुन् । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका शीर्ष नेताहरु महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुमा सांसद डा सुरेन्द्र यादवको राजनीतिक अ’पहरण गर्नेविरुद्ध किटानी जाहेरी दिन पुगको जसपाका नेता विश्वदीप पाण्डेले जानकारी दिए ।
यसै क्रममा अ’पहरण गरी काठमाडौँ ल्याएको जाहेरी दिन प्रहरीले अस्वीकार गरेपछि काठमाडौँ प्रहरी परिसरमा प्रहरी अधिकारीहरु र पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलगायत नेताहरुबीच चर्काचर्की भएको छ। तर, मुद्दा फाँटका डीएसपी कृष्ण चन्दले घटना महोत्तरीमा भएकाले उतै जाहेरी दिनुपर्ने भन्दै जाहेरी लिन मानिरहेका छैनन्। काठमाडौँ प्रहरी प्रमुखका रुपमा आइतबार नै पदबहाली गरेका एसएसपी श्याम ज्ञवाली भने अहिले मेट्रो प्रहरी पुगेका छन्।
समाजवादी पार्टी फुटाउनका लागि जनकपुरबाट काठमाडौं ल्याइएका सांसद यादवलाई बुधबार राति मेरियट होटलमा राखिएको आरोप समाजवादीले लगाएको छ । उनी बिहीबार बिहान होटलबाट भाग्न सफल भएको दाबी गरिँदै आएको छ । तर केहीले भने रातिनै राजपा र समाजवादीबीच एकता भएपछि उनले अ’पहरणको नाटक गरेको आरोप लगाएका छन् ।
No Comments on घरमा राहतको चामल थुपार्दै फेरी लिन आउनेलाई कृष्ण कँडेलले बिच सडकमै यसरी उठबस गराए (भिडियो हेर्नुस्)
कोरोनाबाट विश्वभर ४९ नेपालीको निधन, दुई हजार संक्रमित
No Comments on कोरोनाबाट विश्वभर ४९ नेपालीको निधन, दुई हजार संक्रमित
विश्वभर फैलिएको कोभिड–१९को महामारीबाट शनिबार साँझसम्म निधन हुने गैरआवासीय नेपाली ४९ पुगेका छन् । गैरआवासीय नेपाली संघ(एनआरएन), स्वास्थ्य समितिले संकलन गरेको तथ्यांकानुसार बेलायतमा ३३, अमेरिकामा १०, संयुक्त अरब इमिरेट्समा दुई तथा आयरल्याण्ड, जापान, टर्की र नेदरल्याण्डसमा एकएक जनाको निधन भएको हो ।
नेपालमा भने ५१ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको तथा १२ जना कोरोनामुक्त भएको समितिले जनाएको छ । यस्तै विदेशमा कोरोना संक्रमण भएका गैरआवासीय नेपालीमध्ये ४३४ जना कोरोनामुक्त भएको बताइएको छ । संक्रमित हुने नेपालीमा अमेरिका एक हजार, बेलायत सात सय, संयुक्त अरब इमिरेट्स ८१, बहराइन ४९, कुवेत ४२, पोर्तुगल २७, आयरल्याण्ड २२, स्पेन १२, अष्ट्रेलिया ११, बेल्जियम छ, स्वीजरल्याण्ड पाँच ,साउदी अरब र जर्मनी चारचार, मलेशिया, क्यानडा, न्युजिल्याण्ड र साइप्रस तीनतीन, जापान, हङकंङ र माल्टा दुईदुई तथा फ्रान्समा एक जना रहेको समितिले जनाएको छ ।
दिवेशलाई ‘अमेरिकन आइडल’ जिताउन तपाई पनि भोटीगंका लागि तयार रहनुहोस्, यस्तो छ भोटीगंका लागी गर्ने तयारी (हेर्नुहोस् भिडियो)
No Comments on दिवेशलाई ‘अमेरिकन आइडल’ जिताउन तपाई पनि भोटीगंका लागि तयार रहनुहोस्, यस्तो छ भोटीगंका लागी गर्ने तयारी (हेर्नुहोस् भिडियो)
Hello, Namaste: Arthur Gunn/ Dibesh Pokharel fans, It is time to vote for our friend and brother Dibesh pokharel on April 26th 2020 after the live round of the American Idol. Each person can vote 30 times, Here are3ways to vote:
No Comments on बिदेशी मिडियामा किम जोङको निधन भएको समाचार सार्वजनिक, टेलिभिजनले पनि दिए ब्रेकिङ्ग न्युज (भिडियोसहित)
एजेन्सी । केहि दिन अघि देखि उत्तर कोरियाली शासक किम जोङको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर रहेको खबर बाहिर आइरहेका छन् । उत्तर कोरियाली शासक किम जोङ उनको स्वास्थ्य स्थिति खराब भएकोले चीनले सल्लाह दिन शनिवार उत्तर कोरियामा चिकित्सकहरुको विज्ञ टोली पठाएको समाचार एजेन्सी रोयटर्सले जनाएको थियो। सर्जरीपछि अवस्था गम्भीर रहेको भन्दै विभिन्न मिडियामा यसअघि समाचार सार्वजनिक भएका थिए।
केहि दिन अगाडी जापानी मिडियाले पनि किम जोंग उन मुटुको शल्यक्रिया पछि उनी बे’होस रहेको दाबी गरेको थियो । जापानको साप्ताहिक पत्रिका शुकान गेनडाईले शुक्रबार एक रिपोर्टमा उत्तर कोरियाका तानाशाह मुटुको शल्यक्रियापछि अचेत अवस्थामा रहेको उल्लेख गरेको समाचार यस भन्दा अघिनै सार्वजनिक भैसकेका छन् । उक्त साप्ताहिकले चिनियाँ स्रोतलाई उदृत गर्दै समाचार लेखेको थियो। समाचारमा किम जोंग उन गाउँको भ्रमण गरिरहेको अचानक छातीमा समस्या आएर भुइमा ल’डेको दाबी गरिएको समाचार विभिन्न अनलाइन माध्यमले सार्वजनिक गर्दै आइरहेका छन् ।
यसै क्रममा न्युज अफ नेपालले समाचार छापिए अनुसार उनलाई स्थानीय अस्पताल लगिएको थियो। बिरामी भएका नेता किमले तत्कालै चीनसँग सम्पर्क गरेर चिकित्सक र औषधी पठाउन सहयोग मागेका थिए। अवस्था जटिल बनेपछि उत्तर कोरियाली चिकित्सकले चिनियाँ मेडिकल ग्रुपलाई कुर्न सम्भव नठानेर आफै अपरेसन गरे। कम अनुभवि रहेका शल्यचिकित्सकले हात काम्दै अपरेसन थिए। अहिले नेता किम बेहोस अवस्थामाु रहेको दाबी गरिएको छ।
यसै क्रममा अहिले बिदेशी मिडियामा उनको निधनको समाचार निकै भाइरल भैरहेका छन् । बिभिन्न अग्रेजी अनलाइन तथा टेलिभिजनमा उनको निधन भएका समाचार आएपछि अहिले नेपाली समाचार माध्यममा पनि निधनको खबर ब्यापकरुपमा फैलिदै गएको छ । हिजो देखि बिदेशी संचारमाध्यममा उनको निधन सार्वजनिक भएको अपुष्ट समाचार आइरहंदा नेपाली संचारमाध्यममा यस समाचारले प्राथमिकता पाउँदै गैरहेको छ । यस समाचारलाई नेपालका मुलधारका मिडियाले चाही अहिलेसम्म लेखेका छैनन् ।
उत्तर कोरियाली नेता किमको निधन भएको अपुष्ट समाचार बाहिरिए संगै अहिले यस समाचारलाई चासोको रुपमा मान्छेले पढ्ने गरेका छन् । उनको निधनको समाचार विश्वका विभिन्न अग्रणी सञ्चार माध्यमहरूले सार्वजनिक गरेका छन्। हङकङको एक लोकप्रिय टेलिभिजन च्यानल HKSTV ले विश्वस्त सूत्रहरूलाई उदृत गर्दै समाचार सार्वजनिक गरेपछि यसले विश्व आकार लिएको हो।यद्यपि, यसको औपचारिक रूपमा पुष्टी भने भैसकेको छैन।
विश्वले उत्तर कोरियाको नेता किम जोंग उन जीवित वा मृ/त्यु भनेर पर्खिरहेको छ। सबैको आँखा उनको ३१ वर्षीया बहिनी किम यो जोंगतिर फर्किरहेको छ। उनी शीर्ष प्रतिस्पर्धी जस्तो देखिन्छन् । किम जोङको निधन भएको खबर बिदेशका संचारमाध्यममा आएका केहि समाचारका स्क्रिन हामीले यहाँ तल राखेका छौ साथै यसको तल बिदेशी टेलिभिजनमा पनि आएका समाचार हामीले राखेका छौ ।
No Comments on प्रधानमन्त्री र पार्टी दुबै पदबाट राजीनामा माग !